ဗမာပြည်က စစ်အာဏာရှင်များနှင့် လူထုသတင်းစာ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၁၀ အင်တာနက်ပေါ်က လ္ဘက်ရည်ဆိုင်
ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၁၁ သာကီနွယ်ဇာတ်ထုပ် »
ဗမာပြည်က စစ်အာဏာရှင်များနှင့် လူထုသတင်းစာ
ရွှေဥဒေါင်းက ၄၉ ခု မန္တလေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရွှေမန်းဖြစ်ထွေဟု မရှေးမနှောင်းပင် ရှုမဝတွင်ရေးရာ မန္တလေးမြို့တွင်း ပြေးလွှား ပုန်းရှောင်ခဲ့ရပုံ၊ မိတ်ဆွေများက လက်မခံရဲပုံပါရှိသည်။ လူထုတိုက် ဗုံးခွဲသည့်ကိစ္စတွင် လက်နက်ကိုင်တစုဟုသာ သုံးနှုန်းသည်ဟု မှတ်မိသည်။ နောက် အခြေအနေတည်ငြိမ်ပီး ၁၉၆၁ တွင်မှ “ဗုံးခွဲပီးနောက် ဝင်းလိုက်ရုံထဲ ပုန်းနေသော ဦးလှကို ခေါ်ခိုင်းပုံ၊ မအမာနှင့်ညီမများက သူတို့မိဘကို ထည့်ဘို့သတိမရပဲ သူ့ကို နန်းတွင်းထဲလိုက်သွားခိုင်းပုံ (အမှန်တော့ ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်မည်စိုး၍ စာရေးဆရာဝါကြီး လူကြီးသူမအနေနှင့် အားကိုးခြင်းဖြစ်သည်)၊ ခင်ဗျားတို့ရေးတာလွန်တယ်ဟု စစ်ဗိုလ်လေးတယောက်က ကြိမ်းပုံ၊ ဗိုလ်မှူးကြင်နှင့်တွေ့ပုံ”တို့ တသက်တာမှတ်တမ်းတွင် ထည့်ရေးသည်။ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြင်မှာ အင်္ဂလိပ် တပ်က ပါလာသူဖြစ်ပီး ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဝင် စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ပါ။
ကရင်ဝင်စဉ်က လူထုမိသားစုလည်း အခြားမန္တလေးမြို့ခံများနှင့်အတူ အာရမ်တံတိုင်းထုထည်ကောင်းသော စိန်ပန်း မစိုးရိမ်တိုက်၌ ခိုလှုံကြသည်။ မြို့ကို တပ်ကပြန်သိမ်းပီးနောက် သတင်းစာပြန်ထုတ်နေစဉ် ကျောက်သွေးတန်း လူထုတိုက်ပေါ်မှ စစ်တပ်ကို သေနတ်နှင့် လှမ်းပစ်သည်ဆိုပီးဝင်လာသော စစ်သားသေနတ်ကို လက်ကကိုင်၍ “မဟုတ်ထာမပြောနဲ့၊ အပေါ်တက်ကြည့် ဘယ်သူမှမရှိဘူး” ဆိုကာ ခေါ်ပြသည်ဟု ဒေါ်အမာက ပြန်ပြောင်းပြောဘူးသည်။ “ငါက သိပ်သတ္တိကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ပဲစွပ်စွဲတာ စိတ်ဆိုးလို့”။ ထို့နောက် လူထုမိသားစုနှင့် တောခိုစစ်ဗိုလ် ဗိုလ်ကြီးလှဖေမိသားစု၊ အိမ်ဖော်မအံ့ (ဦးလှ၏ ကျွန်တော်စတီးပွဲစားမှ ဝါစက်အလုပ်သမ) စသူတို့ကို သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်ရန်ပြင်စဉ် ဘုန်းကြီးကဝင်ကယ်သည်။ အငယ်ဆုံး ကလေးများမှာ ၂ နှစ်ခန့်ရှိမည်။ သတင်းစာဗုံးခွဲခံရပီးနောက်တနှစ်ကျော်မှ ပြန်ထုတ်နိုင်သည်။
ကလေးသူငယ်များအပါအဝင် အရပ်သား ပြည်သူကို (ဖဆပလဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း သတင်းစာဆရာတဦးနှင့် မေမြို့စစ်ကျောင်း နည်းပြဟောင်းတဦး၏ မိသားစုများ) ပစ်ခတ်ရန်ကြံမှု၊ သတင်းစာပုံနှိပ်စက်များ ဖောက်ခွဲမှုကို အထက်ကမည်သူအမိန့်ပေးသည် သေချာမသိရ။ ထိုအချိန်က စစ်သေနာပတိ လက်ဖတင်နင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း၊ နန်းရင်းဝန်သခင်နုနှင့် အစိုးရမှ နှုတ်ထွက်ထားသော်လည်း စစ်တပ်ကိုသြဇာလွှမ်းသည့် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ကျတပ်မင်းများ လူ့ပြည်တွင် မရှိတော့သည်ကများသော်လည်း တချိန်တွင် ထွက်လာပေမည်။ ကွယ်လွန်သူတင်သန်းဦး၏ ဝါဒဖြန့်ကားတကားတွင် လူထု သတင်းစာက တောတွင်းကွန်မြူနစ်များအတွက်ပုံနှိပ်ပေးနေ၍ ဖြိုခွဲသည်ဟု တုံ့ပြန်ထားသည်ကိုလည်း ကြားလိုက်ရသည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း သတင်းစာထုတ်နေစဉ် ဦးလှက အယ်ဒီတာချစ်ညိုကို ဗီယက်နမ် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်း ဟနွိုင်က ညံဇံသတင်းစာကြီး တရက်မှမပိတ်ပဲ သတင်းမှန်များ လူထုဆီအရောက်ပို့ပေးခဲ့၍ ပြည်သူတွေ သတင်းမှန်ရပီး အားတက်ခဲ့ရသည်ဟု ဥပမာပြ အားပေးသည်ဆိုသည်။ သခင်အုန်းမြင့်ပြောဘူးသော ကိုလှ မအမာတို့က သည်းခံမြိုသိပ်တတ်လို့ လူမသိတာပါဆိုသည့်စကားကိုလည်း ကြားနေမိဆဲ။
ကျနော် တခါတခါ ကိုယ့်ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ၊ အထူးသဖြင့် အဖမ်းခံနေရတဲ့ ကာလအတွင်း၊ တိုက်ထဲမှာ တယောက်တည်း နေရတုန်းမှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ငါ့ဘ၀ရဲ့ အစောဆုံး ဘယ်အပိုင်းကို မှတ်မိသလဲလို့ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ပေါ်လာတာတခုက မန္တလေးမြို့ကို သူပုန်တွေက သိမ်းတဲ့အချိန်၊ ကျနော်တို့ မိသားစုကို သတ်ဖို့ စီစဉ်ကြတဲ့ ကိစ္စ၊ ကျနော်တို့အိမ်က ပုံနှိပ်တိုက်ကြီးကို မိုင်းဗုံးနဲ့ခွဲတဲ့ ကိစ္စ၊ အဲဒါ ကျနော် အစောဆုံးမှတ်မိတာပဲ။ ကျနော်တို့ မိသားစုကို သတ်ဖို့ပြင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အခုအခါမှာ ကြားဖူးသူ အတော်ရှားမယ်ထင်တယ်။ သိတဲ့သူလည်း နည်းမယ်ထင်တယ်။ စာတွေ ဘာတွေထဲမှာ သိပ်ပြီး မပါဖူးဘူး။
အဲဒီတုန်းက သတ်မယ်လုပ်သူဟာ အဲဒီတုန်းက မန္တလေးမြို့ထဲကို ၀င်ကြတဲ့ သူပုန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ မန္တလေးမြို့ကိုဝင်တဲ့ သူပုန်တွေကမျိုးစုံပါ။ ကျနော် သိသလောက်ဆိုရင် ကွန်မြူနစ်ပါတီလည်း ၀င်တယ်။ ကရင်လည်းဝင်တယ်။ ရဲဘော်ဖြူလည်း ၀င်တယ် (ရဲဘော်ဖြူ ဆိုတာက ပြည်သူ့ရဲဘော်ကို ပြောတာပါ) ဒါပေမဲ့ သူတို့က သတ်ဖို့လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မိသားစုကို သတ်ဖို့ လုပ်တာက အစိုးရတပ်ပါ။
ကျနော့်မျက်စေ့ထဲက မထွက်နိုင်တဲ့ အဲဒီတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျနော် ပြန်ပြောပြပါ့မယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့ နေကြတာဟာ အခု ၈၄လမ်း နဲ့ ၃၃ လမ်းထောင့်က လူထုတိုက်နေရာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိနေရာမှာက အဲဒီတုန်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဗုံးကျထားတဲ့ တိုက်ပျက်အုတ်ခဲပုံကြီး။ အဲလို အုတ်ခဲပုံကြီးပေါ်မှာ တဲလေးတလုံးထိုးပြီး ဘလောက်လုပ်ငန်း လုပ်နေတဲ့ မြသီတာ ဘလောက်တိုက်ဆိုတာပဲ ငုတ်တုပ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က အခု ၀င်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့ တောင်ဘက်က တအိမ်ခြား၊ နောင်မှာ ဦးချမ်းစားသောက်ဆိုင်ဆိုတာ ဖြစ်လာတဲ့ ရွှေကုန်သည် ဦးသိန်းမောင်တို့ရဲ့ တိုက်ကို အောက်ထပ်မှာ ငှားပြီး နေကြတာပါ။ သူတို့အိမ်ရှင်များက အပေါ်ထပ်မှာ နေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုက်မျက်နှာစာမှာတော့ အမေတို့ အဖေတို့က စာအုပ်ဆိုင်လေးလို လုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်တိုက်ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေရော အခြားစာအုပ်တွေပါ ရောင်းပါတယ်။ ပုံနှိပ်စက်က ကျနော်တို့ နောက်ဖေးက ကျနော့်အဖိုးအဖွားများရဲ့ ဂုန္တန်းဝင်းထဲမှာပါ။ ၀ါးကပ်တဲ အရှည်ကြီးတခုထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တုန်းကပါ၊ ကျနော်ထင်တယ် (၄၉) ခုနှစ် အစောပိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ နွေခေါင်ခေါင်ကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး။ နွေဦးပေါက်စ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်အသက် သုံးနှစ်ကျော်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မန္တလေးဆိုတော့ ရာသီဥတုက နေ့လယ်မှာ ပူပါတယ်။ အဲဒီရက်က ကျနော့်မိဘတွေက ဘယ်ကနေ ဘာသတင်းရထားတယ် ကျနော် မသိပါဘူး။ ကျနော်က သိပ်ငယ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မိသားစု တစုလုံး တထိတ်ထိတ် တလန့်လန့်နဲ့ နေကြတာကိုပဲ ကျနော်မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒီနေ့မှာကျတော့၊ ကျနော်တို့အိမ်ထဲကို အစိုးရစစ်သားတွေ ခဏခဏ ၀င်-၀င်လာတာ လည်း ကျနော်မှတ်မိနေတယ်။ နောက်တခါ ကျနော်တို့တတွေ အဖေနဲ့အမေအိပ်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ခန်းဝင် ကုတင်ကြီးရဲ့နောက်မှာ အားလုံးထိုင်ပြီး ပုန်းနေကြတယ်။ အဖေနဲ့အမေတို့က မင်္ဂလာဆောင်တာ မန္တလေးမှာဆောင်တာ၊ ဒါပေမယ့် အဖေက ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရန်ကုန် ဘုံဘေဘားမား ကုမ္ပဏီကနေ ၀ယ်လာတာ။ ခုနကပြောတဲ့ ကုတင်ကြီးက ဧရာမကျွန်းကုတင်ကြီး။ ခေါင်းရင်းပိုင်းက အကာဟာ ငါးပေလောက်မြင့်မယ် ထင်တယ်။ အဲဒီအကာကြီးနဲ့ အုတ်နံရံအကြားမှာ ကျနော်တို့ မိသားစုခြောက်ယောက်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်ညီအငယ်ဆုံး မမွေးသေးပါဘူး။
ကျနော်တို့အားလုံး ထိုင်ပြီးပုန်းနေကြတာ။ အတော်ကြာပါတယ်။ ဘယ်နှနာရီ ရှိမလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အစိုးရစစ်သားတွေ အိမ်ထဲကို ၀င်လာတာ ထပ်ကြားတယ်။ ကျနော်တို့တတွေ မျက်ရိပ်ပြပြီး တိတ်တိတ်ကလေး ထိုင်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ အခန်းက ခပ်မှောင်မှောင်ရယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခန်းသုံးခန်းထဲသာရှိတဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ကို အဲဒီစစ်သားတွေက ခဏနဲ့ပဲ ရှာတွေ့သွားတယ်။ သူတို့လက်ထဲမှာ သေနတ်တွေနဲ့ စစ်မြေပြင် ဆင်းတဲ့ပုံစံ အပြည့်ပဲ။ ဗိုလ်လုပ်တဲ့သူက ကျနော်တို့ အားလုံးထွက်ခဲ့ပေါ့။ သူတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတယ်။ အဲ့တော့ ပုန်းနေတဲ့ ကုတင်နဲ့ နံရံကြားက ကျဉ်းကျဉ်းလေးမို့ အဖေတို့ အမေတို့ တယောက်ချင်း ထွက်ကြရတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျနော်နဲ့ ကျနော့်အကိုဟာ တူတူပုန်းတဲ့အခါ ကစားလေ့ရှိတဲ့အတိုင်း တယောက်ကိုတယောက် လှမ်းကြည့်ပြီး အဲဒီကုတင်ကြီးရဲ့ အောက်ထဲကို အသာလှည့်ဝင်ပြီး ပုန်းနေလိုက်ကြတယ်။ အခန်းက ခပ်မှောင်မှောင်ဆိုတော့ စစ်သားတွေလည်း သတိမထားမိလိုက်ကြဘူး။ အဖေနဲ့အမေနဲ့၊ အမနဲ့နှမပေါ့လေ သူတို့ကိုပဲ ခေါ်သွားပြီးတော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့ ကြတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ကုတင်အောက်မှာ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီး ပြံးနေခဲ့ကြတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး၊ ကလေးပြုံးပြုံးကြတာပဲ။
နောင်မှာ ကျနော်တို့ ကြီးလာကြတော့လည်း ဒီကိစ္စဘာမှ ပြန်မမေးဖြစ်ဘူး။ တယောက်နဲ့ တယောက် ဒီအကြောင်း စကားမစပ်ကြတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ မိဘတွေနဲ့တောင် ပြန်မပြောမိကြတော့ဘူး။ ပြန်မစဉ်းစားချင်တော့တဲ့ ကိစ္စတခုလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အတော်လေးနေတော့မှ “နှစ်ယောက် လိုသေးတယ်၊ နှစ်ယောက်လိုသေးတယ်” ဆိုပြီး စစ်သားတွေ ပြန်ဝင်လာတယ်။ အဲဒီကျတော့ ကျနော်တို့ ပုန်းလို့မရတော့ဘူး။ တွေ့သွားတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ကုတင့်အောက်က ထွက်လာခိုင်းတယ်။ နောက် အပြင်ကို ထုတ်လာတော့ အပြင်မှာ ကျနော့်အဖေ၊ ကျနော့်အမေ၊ ကျနော့်အမနဲ့ ကျနော့် နှမတို့ကိုတွေ့ရတယ်။ ၀င်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကျနော့်အဖိုးနဲ့ အဖွားပိုင်တဲ့ အောင်မြန်မာစက္ကူဆိုင် ဆိုတာရှိတယ်။ တထပ်တိုက်တန်းကြီးတခုပါ။ အဲဒီ တထပ်တိုက်တန်းဟာ အုတ်ခုံအမြင့်ခံပြီး ဆောက်ထားတာပါ။ အဲဒီအရှေ့မှာပဲ အားလုံးကို တန်းစီပြီး ရပ်ခိုင်းထားတာ တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုလည်း ကျန်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ ၀င်ပြီး ၀င်ပြီးတန်းစီရတာပေါ့။ ကလေးဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို ပစ်သတ်ဖို့ ပြင်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိတာမဟုတ်ဘူး။ သဲသဲကွဲကွဲ သိတာမဟုတ်ဘူး။ သဘောတော့ပေါက်တဲ့ပုံရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြောက်ရမှန်းမသိတာ အမှန်ပဲ။
အစိုးရစစ်သားတွေက သေနတ်ကို ကျည်ထိုးပြီး ပစ်မိန့်ကို စောင့်နေကြပြီ။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီအဖြစ်တွေကို ၀ိုင်းပြီးကြည့်နေကြတဲ့ လူ(၃၀-၄၀) လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ခဏနေတော့ အဲဒီဘေးက ကြည့်နေတဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် သံဃာတွေက စစ်သားတွေကို ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ၀ိုင်းပြီး မေတ္တာရပ်ခံကြတယ်။ သူတို့အချိန်အတော် လေးပြောရတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာလဲတော့ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဓိက ဖြောင်းဖြတဲ့ အထဲမှာက ဘုရားကြီးအနောက်ဖက် (တောင်ထီးလင်းတိုက်) ပေပင်ကျောင်းက ဆရာတော်ဦးကောဝိဒပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းကတော့ ဦးဇင်းပေါ့။ နောက်ဆုံးကျတော့ အဲဒီစစ်ဗိုလ်က လက်ခံသွားပြီး ကျနော်တို့ကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ မိသားစုဟာ အဲဒီဆရာတော်ကို တသက်လုံး ကျေးဇူးရှင်လို သဘောထားပြီး ကျနော်တို့အိမ်က သူ့ဆီကိုအပတ်တိုင်း ဆွမ်းပို့ပေးပါတယ်။ စစ်သားက ကျနော်တို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ နောက်မှာ သံဃာတော်တွေကို ကန်တော့ကြ၊ ၀ိုင်းပြောပေးကြတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြ၊ အဲဒါတွေတော့ ကျနော်မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့က ဘာမှပြောတတ်တာ၊ သိတတ်တာ မဟုတ်တဲ့ အခါကျတော့ အမေအဖေတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို မျက်စိအ၀ိုင်းသားနဲ့ ကြည့်နေကြတာ။
ကျနော်တို့အိမ်မှာ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထည့်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ် အညိုရောင်လေး တအုပ်ရှိတယ်။ အတော့်ကို ဟောင်းနေပြီ။ အထဲက ဓာတ်ပုံတွေကလည်း ၀ါတာဝါနေပြီ။ ကျနော်တို့ နည်းနည်းကြီးလာတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီ အယ်လဘမ်လေးကို မကြာခဏ လှန်ကြည့်တတ်ကြတယ်။ ဒါဘယ်သူပဲ ဒါဘယ်သူပဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ပုံကိုယ်လည်းကြည့် အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာကြတာပေါ့။ အဲဒီ လူရုပ်ပုံ အမျိုးစုံပါတဲ့ အဲ့ဒီ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ လက်ရေးမူ စာတစောင်ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ညှပ်ထားတာ ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီစာပါ အကြောင်း အရာက ဦးလှနဲ့ဒေါ်အမာတို့ကို ဒုက္ခမပေးဖို့ တပ်တွေကို ညွှန်ကြားထားတဲ့ဟာပါ။ လက်မှတ်ထိုးထားတာက အဲဒီတုန်းက မန္တလေးမြို့သိမ်းတပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြင်ပါ။ ဗိုလ်မှူးကြင်ဆိုတာက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ လူရိုးလူကောင်းဆိုပြီး တပ်ထဲမှာနာမည် ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ နောက်ကျတော့ ပြည် တွင်းစစ်မှာပဲ သူကျဆုံးသွားတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြင်လက်မှတ်နဲ့ အဲဒီစာလေးရှိပါတယ်။ ဒီစာကို ကျနော်တို့အိမ်ထဲ အစောပိုင်းဝင် သွားတဲ့ စစ်သားတွေက ပေးသွားတာပါ။ ဒီစာရှိလျက်နဲ့ နောင်မှာဘာဖြစ်လို့ ထုတ်သတ်ဖို့ ဖြစ်လာလဲဆိုတာတော့ ကျနော်လည်း ကျနော့်အဖေ အမေကို မမေးမိလို့ မသိတော့ဘူး။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျနော်တို့ လူထုသတင်းစာတိုက်ရဲ့ စာပုံနှိပ်စက်ကို မိုင်းဗုံးနဲ့ခွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာပဲ။ ကျနော်ထင်တာတော့ အထက်က အဖြစ်အပျက်တွေပြီး နောက်တနေ့လောက်လို့ထင်တယ်။ ဆက်တိုက်ပဲ။ ကျနော်တို့ စာပုံနှိပ်စက်ကို အစိုးရတပ်က မိုင်းဗုံးနဲ့ခွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အိမ်ကိုကြိုတင် အကြောင်းကြားထားတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်က လူတွေအားလုံး ကြိုသိနေကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ နားစွင့်နေတုန်းမှာပဲ ‘၀ုန်း’ ဆိုတဲ့ အသံကြီးတသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ အဖေနဲ့ အမေတို့ မျက်နှာတည်သွားတာကျနော် အခုထိ မှတ်မိနေတယ်။ ညနေပိုင်းကျတော့ ကျနော် အဲဒီကို သွားကြည့်တယ်။ ပုံနှိပ်စက်က ကျနော်တို့ နောက်ဖေးက ဂုန္တန်ဝင်းထဲမှာ။ အဲဒီတုန်းက ပုံနှိပ်စက် အဆောက်အဦးထဲမှာ ဝါးကပ်တဲကြီးထဲမှာက သတင်းစာရိုက်တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံလုပ် ‘ပိန်း’ စက်ကြီးရှိတယ်၊ နောက် ‘ချန်ဒလာ’ ဆိုတဲ့ ပုံနှိပ်စက် အငယ်လေးတွေရှိတယ်။ နောက် စက္ကူဖြတ်စက်ရှိတယ်။ နောက် စာစီခုံတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျနော်ရောက်သွားတဲ့အခါ ကျတော့ကပ်တဲကြီးလည်း ပြိုနေပြီ။ သတင်းစာ ရိုက်တဲ့စက်ကြီးလည်းပျက်လို့။ စာစီခုံတွေနဲ့ ခဲစာလုံးတွေကလည်း ဖရိုဖရဲနဲ့ အင်မတန်ကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ ဒေါသဖြစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပဲ။
ကျနော့်အသက်က ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ (၃) နှစ်ကျော်လေးပဲ၊ ငယ်ငယ်လေးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်တာကို အနိုင်ကျင့်တာပဲလို့တော့ ခံစားမိတယ်။ ၀မ်းလည်းနည်း ဒေါသလည်း အင်မတန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုရေးခဲ့တာဟာ ၃- ၄ နှစ်သား တဦးက ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါ ကျနော် မှတ်မိသလောက်လေးပဲဖြစ်တယ်။ လပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ကျန်တဲ့သူတွေ၊ ခုနက ကျနော့်မိသားစုတွေ ဖြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလပ်နေတာဟာ ကျနော် ပြောတာရဲ့ (၁၀) ဆလောက်ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Filed under: family, guest column, history, media, politics, recycled	|4Comments
4 Responses to “ဗမာပြည်က စစ်အာဏာရှင်များနှင့် လူထုသတင်းစာ”
1 shwezinu on April 26, 2011 said:
ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ
2 ထွန်းထွန်း on April 27, 2011 said:
ကိုသံချောင်းခင်ဗျာ အမှားထောက်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်သိတာနဲ့ကွဲလွှဲနေတာကိုတင်ပြတာပါ။ ကျနော်သိသလောက် ဗိုလ်မှူးကြင်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံက ဗိုလ်မှူးဘကြင်ပါ။ ကျနော့်အဖိုးနဲ့သူက စစ်မဖြစ်ခင်က ရန်ကုန်မှာ ဘုရင်ခံရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဦးဘသိန်းအိမ်မှာ အတူတူနေခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူ့ကို ကျနော်ငယ်ငယ်က (၁၉၇၅ခန့်)က စစ်ကိုင်း သရက်တပင်ဆိပ်မှာ ပျော်ပွဲစားထွက်ရင်းဆုံမိလို့တွေ့ဘူးပါတယ်။ ကျနော်တို့မိသားစုရဲ့ ပျော်ပွဲစားခရီးမဟုတ်ပဲ သူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်ပွဲဖြစ်သွားပါတယ်။
3 bobolansin on April 27, 2011 said:
ဗိုလ်မှူးကြင်နဲ့ ဗိုလ်မှူးဘကြင်ဟာ တခြားစီ၊ လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြင်ဟာ ၅၀စုနှစ်များအစောပိုင်းမှာပဲ (ကွန်မြူနစ်နဲ့ထင်တယ်) တိုက်ပွဲတခုမှာကျသွားပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးဘကြင်ကတော့ ၁၉၆၀ခုနှစ်များထဲမှာ ကျနော်တို့အရင် ၂နှစ်လောက်စောပြီးမန္တလေးထောင်ထဲကိုရောက် နေပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးသန်းအောင်လည်းရှိပါတယ်။
4 Myint Zan on January 13, 2015 said:
There are five Burmese spelling mistakes inaone sentence letter in Burmese written by ‘Kyin’ dated 24 April 1949. I know the spelling mores were different then but even in 949 KYOKE (‘I’) is spelt not with KA GYI YA YET TA CHAUNG NGIN PA THAT but withaYAT PIN. Also spelling mistakes with THADIN SAR (newspaper) PAT THET (concerning) HTIN YAUNG HTIN HMAR (‘misperceptions’), AHG_HNAUK ASHET (‘harrassment’/’disturbance’) TAR WUN KHAN (‘guarantee’).